Waxa la Sameynayo Marka Xakameynahaaga Xbox One uusan ku xirmin
Xakameynta Wireless Xakameyaal waa mid weyn, lakiin khibrad gaar ah oo dhexmarta bartamaha cayaar waxay nuugaan dhamaanba xiisaha tooska ah ee qolka. Warka wanaagsani waa in dhibaatooyinka ugu badan ee keeni kara xakamaynta Xbox One in aysan ku xirnayn, ama keenin isku xirnaansho in ay ku fashilmaan, waa ay fududahay in la hagaajiyo. Iyo xitaa xaalad kiis oo xun, waxaad mar walba ku celin kartaa koontarooladaada wireless si aad u xakameyso koontaroolka wiishka leh USB-ga .
Habka ugu fiican ee lagu ogaanayo sababta ay udubdhexaadiyuhu u shaqeyn waayeen waa inaad isweydiiso su'aalaha soo socda, ka dibna u akhri si aad u ogaatid xalka ay u badan tahay inuu shaqeeyo:
Maareeyuhu miyuu ka baxay meelo kala duwan?
Miyaad ka tagtay kumbuyuutarka aan firfircooneyn muddo ka badan 15 daqiiqo?
Ma isku dayeysaa inaad isku xirto wax ka badan sideed kantaroole?
Batariyadu ma daciifaan?
Miyaad leedahay miis ama kulayl lagu xiro maaraynta?
Qalab kale oo elektiroonig ah ma sameyn karaa faragalin?
Miyaad ku xidhay maarayntaada qunsul kale?
Maareyntu ma u baahan tahay in la dejiyo?
Maaraynta ma u baahan tahay in la cusboonaysiiyo?
Mararka qaarkood sifirta sariirta, iyo helitaanka waxoogaa ku dhow Xbox, waa wax kasta oo ay qaadato. Degenaansho ee Degdeg / Muuqaalka Barta / Getty
Dhibaatada: Xbox One controllers waa wireless, laakiin waxaa jira xadka u dhaxeeya qalabka elektarooniga ah ee ka hor inta aysan lumin xiriirinta . Xadka ugu sareeya ee xakameynta Xbox One waa qiyaastii 19 fuudh, laakiin walxaha u dhexeeya qunsulka iyo kontoroolka ayaa si weyn u yareeyn kara tiradaas.
Fixinta: Haddii kambiyuutarkaagu uu si lama filaan ah u jebiyey, oo aadan sax u ahayn dhinaca xigta, isku day inaad dhaqdhaqaaqa u sii dhawaato oo aad dib u dhigto. Haddii ay mar kale lumiso xiriirka markaad guurto, ka dibna isku day inaad dhaqaaqdo wixii shey ah ee ku soo socda ama aad u sii dhejisid Xbox.
Haddii aad isku mashquuliso, maamulahaaga ayaa si toos ah u xiraya. Miguel Sotomayor / Moment / Getty
Dhibaatada: Si looga hortago bateriga in uu dhinto, Xeerka Xbox One waxaa loogu talagalay inuu xiro ka dib 15 daqiiqo oo aan dhaqdhaqaaq lahayn.
Fixin: Riix badhanka Xbox ee kontoroolkaaga, waana inuu dib udhigaa oo isku xiraa. Haddii aadan dooneynin in la xiro mustaqbalka, riix ugu yaraan hal boodhka kontoroolka marwalba, ama ku dheji mid ka mid ah ulaha analogga ah.
Ogsoonow: Ka hortagida xakamaynta Xbox One ka soo gaabinta, ama isku xiridda tuubada analogga, waxay keeni doontaa in batariyadu si dhakhso ah u dhintaan.
Xakameyaal badan oo isku xidhan
Xbox One wuxuu taageeri karaa oo keliya sideed kantaroole, sidaas darteed isku xirka wax kabadan oo aan shaqaynayn.
Dhibaatada: Xbox One wuxuu yeelan karaa oo kaliya sideed kantaroole oo la xidhiidha hal mar. Haddii aad isku daydo inaad isku dhejiso xakameyn dheeraad ah, ma shaqeyn doonto.
Fixin: Haddii aad hore u haysatey sideed kantaroole, waxaad u baahan tahay inaad kala tagto ugu yaraan mid ka mid ah adigoo riixaya badhanka Xbox ee korjoogaha iyo xulashada Controller off on screen TV.
Beteriyada ku jira Koontaroolka Dhimirka Dhimirka Dhimashadu waa Dhimasho
Batariyaal qallafsan ayaa tarjumi kara xiriirka wireless aan daciif ahayn.
Dhibaatada: Bateriga liitaha waxay hoos u dhigi karaan awoodda signalka ee xakamaynta Xbox One, kaas oo sababi kara arimaha xiriirka. Marka tani dhacdo, badhanka Xbox ee maaraynta ayaa si joogto ah u shidan marka ay lumiso xiriirka, iyo xakameyntu way xitaa demi kartaa.
Qalabka: Badeecadaha ku beddel beteriyada cusub ama beteriyada si buuxda loo soo shubi karo.
Kulankaaga wuxuu ka hortagayaa Xiriirka
Xaaladaha qaarkood, kulaylku wuxuu ka hortagi karaa xiriirka. Xbox
Dhibaatada: Xaaladaha qaarkood, nambarka ama micmadu waxay ka hortagi kartaa xakameyntaada Xbox One in aad isku daydo.
Fixin: Haddii aad haysatid dhejis ama mugdi ku xidhan koontaroolahaaga, ka saar oo isku day inaad dib u xiratid. Waxaa laga yaabaa inaad awoodi kartid in aad ku dhegeyso madaxaaga kadib dib-u-xiriir guul leh, ama waxaa laga yaabaa in ay dhibaato ka timaado kuluglaha kaa horjoogsanaya inaad sidaas sameysid.
Qalab kale oo Wi-Fi ah ayaa is-dhexgalaya
Qalabka telefoonada sida laynka, laptops, jidadka, iyo xitaa microwave-kaaga ayaa sababi kara faragelinta xakameynta Xbox One. Andreas Pollock / Baanka Sawirka / Getty
Dhibaatada: Xbox-kaaga wuxuu isticmaalayaa qayb ka mid ah qaybaha siman ee loo isticmaalo waxyaabo badan oo qalabka elektaroonigga ah ee gurigaaga , xitaa qalabyada sida mashiinnadaada microwave waxay sababi kartaa faragelin.
Fixin: Isku day inaad xirto dhamaan qalabka elektarooniga ah ee isticmaala isku xirka wireless, sida telefoonada, laptops, kiniinnada, xitaa router- gaaga Wi-Fi . Sidoo kale xir qalabka, sida mikrowawyada, taageerayaasha, iyo walxaha, kuwaas oo abuuri kara faragelin. Haddii aysan suurtogal ahayn, markaa ugu yaraan isku day inaad ka baxdo qalabkan oo kale ka fog Xbox One.
Xakamaynta waxaa loo xilsaaray qunsulka qaldan
Waxaad isticmaali kartaa xakamaynta Xbox One oo leh Xbox consoles-ka badan, xitaa xitaa isticmaalka kambiyuutarka la midka ah, laakiin waxaad u baahan tahay inaad mar walba dib-u-dejiso.
Dhibaatada: Xbox One kantaroolayaasha waxaa lagu dhajin karaa kaliya hal qunsuliyad. Haddii aad la socoto qunsulka cusub, kantaroole ma sii shaqeyn doono qunsuliyada asalka ah.
Fixin: Riix Resync si aad u isticmaasho qandaraaslaha aad rabto in aad isticmaasho kumbuyuutarka. Waa inaad ku celcelisid marxaladan mar kasta oo aad rabto in aad isticmaasho koontaroole leh qunsul kale.
Kormeeruhu wuxuu u Baahan Yahay in la Xakameeyo
Mararka qaarkood waa uun jilicsanaan, iyo cabsigelinta kantaroolahaagu waa wax walba oo ay qaadato.
Dhibaatada: Maamulaha ayaa lumiyay xidhiidhkiisa iyada oo loo marayo qoryaha qaarkood, ama mid ka mid ah arrimaha hore loo soo sheegay.
Fixin: Marka aysan jirin sabab dhab ah, ama aad horay u xallisay dhibaatada, talaabada xigta waa in ay si fudud dib u dhigto xakamayntaada.
Si aad u dejiso xakamaynta Xbox One:
Dami Xbox One.
Riix badhanka sync ee Xbox.
Riix oo hayso badhanka sync ee kontoroolkaaga.
Ku sii daa badhanka sync ee kontoroolka marka iftiinka Xbox ee kontaroolku joojiyo iftiiminta.
Kormeeruhu wuxuu u Baahan Yahay Dib u Diyaarinta
Cusbooneysiinta kumbuyuutarka ayaa mararka qaar hagaajin doona arrin xiriirin ah. Microsoft
Dhibaatada: Xakamaynta Xbox One wuxuu dhab ahaantii ku leeyahay qalabka dhismaha, iyo haddii qalabka softwareku uu yahay mid musuqmaasuq ah ama waqti go'an laga yaabo inaad la kulanto arimaha xiriirka.
Fixinta: Xalka dhibaatadani waxaa ka mid ah cusboonaysiinta qalabka kumbuyuutarka.
Habka ugu fudud ee lagu sameeyn karo waa inaad soo celiso Xbox-kaaga, waxaad ku xirtaa Xbox Live, ka dibna ku dheji Qalabka > Kinect & qalabka > Qalabka & qalabka , kadibna dooro kantaroolka aad dhib ku qabto.
Haddii aad leedahay kantaroole cusub, kaas oo aad ku ogaan karto joogitaanka 3.5 mitir kuleyliyaha hoose, waxaad ku samayn kartaa casriga si siman. Haddii kale, waxaad u baahnaan doontaa inaad ku xirto kambiyuutarkaaga qunsulkaada adigoo isticmaalaya fiilada USB.
Isticmaalka Xakamaynta Xbox One One leh USB Cable
Haddii kantaroole weli wali shaqeynin ka dib markaad isku daydo dhamaan wixii suurtagal ah ee suurtagal ah, markaa waxaa jiri kara dhibaato jireed oo leh qunsulkaaga ama kantaroolahaaga.
Waxaad sii xoojin kartaa hoosta adiga oo isku dayaya inaad u xakameyso koontaroolaaga Xbox One. Haddii ay si fiican u shaqeyso, markaa dhibaatadu waxay ku jirtaa Xbox One konsalka mana aha kantaroolaha. Haddii aysan weli ku xirmin, markaa waxaad leedahay lataliye jaban.
Xaalad waliba, waxaad awoodi kartaa inaad isticmaasho kumbuyuutarka adigoo si fudud ugu xiraayo qunsulka adoo isticmaalaya fiilada USB. Tani way ka sahlan tahay isticmaalka kumbuyuutarka si siman, laakiin way ka qaalisan tahay iibsashada kumbuyuutar cusub.
'GTA 4: Dhacdooyinka laga bilaabo Magaaladda Liberty' Qiyaanoole loogu talagalay Xbox 360
Ciyaarta Video iyo Dhaqdhaqaaqa Motion
Fikradaha hadiyadeed ee loogu talagalay Xbox One ee cusub
Ciyaartoyda ugu wanaagsan 10-ka ciyaarood ee ugu wanaagsan kubadda cagta
Sidee loo ciyaari karaa qabsashada!
Halo buugaagta buugga
Xidigaha ugu sareeya Xbox 360
Baro khadka ugu fiican iyo siraha ee 'Need for Speed: Carbon' oo ku taal PS2
Maxaa yeelay - Command Linux - Unix Command
IPhone 4S Su'aalaha & Jawaabaha
Sida loo Isticmaalo Hubinta Sigaarka ee iTunes
Sida loo Furi karo, Badbaadin Karo, iyo Isku Bedelida Email Ku-Xigeenada Windows Mail
Sida loo Isticmaalayo iTunes on Dhexdhexaad Ba'an oo Dibedda ah
Tilmaamaha Bellverout (Pokemon # 69)
Maxay Tahay Xeerka XLTX?
Sida Loo Shaaciyo Qorshaha Shaqada Kala Duwan
Lords of Review Review Waterdeep
Baro Taariikhda Daabacaadda Desktop
Goobaha Raadinta Dadka Ugu Wanaagsan ee Badan
Baro sida Suufiyada loo Buuxiyey Sawirada iyo Soo Bandhigyada
Sidee loo tiriyaa tirooyinka xarfaha leh ee Excel hoos u dhigaya Function ROUNDDOWN
Car Audio Crossovers: Ma u Baahan Tahay?
Sida loo qaado Screenshots on Android
Sicirinta qiimaha loogu talagalay xayeysiiska internetka ee kuugu jira bloggaaga
Dilka Heerka 2 Talada Dhibbanaha Qaybta 1aad
PDF Qeybaha PDF